Aagagga Is-Maamulaha Ku-Meel Gaarka ah - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Mutual
Bogga ugu weyn/updates/Soonayaasha Ku-meelgaarka ah
Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa calaamad u ahaa dhammaadka Xarunteenna Musiibada Musiibada ee Tampa Mutual Aid Disaster Relief Post-Irma kadib, Booska waxaa si deeqsinimo leh noogu deeqay Kaniisadda St Paul Lutheran. Booskaani wuxuu ahaa mid farshaxan ah, la adeegsan karo, diiran oo hal abuur leh. Sida tijaabooyin waa weyn oo bulsho halkaasoo ururiyayaashu u leeyihiin xukun xor ah oo lagu abuuro, mashruucyo dib loo riixay oo laga soo baxay, fikradaha ayaa la badelay qorshayaashana waxaa lagu dhiirrigeliyay inay midho dhalaan.
Laga bilaabo habeenka waraaqda maxbuuska, qoraalada dokumentiga, ilaa cuntada loo diyaariyo, boqolaal xirmooyinka daryeelka ah oo laga diray goobta, dib ucelinta warbixinada, aqoon isweydaarsiga, xirfadaha, kulamada kooxeed, furitaanka majaajillada, dhaqan galinta xagjirka, iyo dabcan, bilaabista kooxaha gargaarka ee ka wada shaqeeya gargaarka musiibada ee Puerto Rico, Immokalee, Furayaasha, Apopka, Jacksonville, iyo xitaa shaqada midnimada qaxootiga ee Belgium iyo France. Waxaan u adeegsannay afarta derbi inaan duminno derbiyada kale waana shaqeynay. Booska waxaa loogu talagalay saaxiibbada guri-laawayaasha ah inay ku maydhaan, ku maydhaan dharka iyo xitaa lammaane bilaa guri ah si ay u yeeshaan casho sannad-jacayl jacayl ah.
Waxaan booska la wadaagnay Tampa Food not Bambooyin, Jacaylku Ma Lahan Xudduud, Tampa Bay DSA, Isbahaysiga Caddaaladda ee Dib-u-Celinta, Nolosha Madow Matter Tampa, Tampa Anarchist Black Cross iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo xorriyadda ah. Boosku wuxuu lahaa rug caafimaad oo bilaash ah, maktabad bilaash ah, qolka ciyaarta carruurta, jikada bulshada, iyo meel u furan dadka inay ku wadaagaan fanka iyo suugaanta Darbiyada waxay hayeen xigashooyinkii kacaanka ee Zapatista, sawir-sheekooyin, fariimo kale oo taageero iyo midnimo leh, iyo sawiro lagu xasuusto Andrew Joseph III, Meg Perry iyo Alonso Guillen - waa dadkii aan ku weynay wadada. Rugta caafimaadku waxay dawaysay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed, waxay siisay acupuncture, reiki, massage, shah geedo yaryar iyo tinctures, daryeelka sonkorowga, waxay qalajisay fuuqbax waxayna bilawday xarumo caafimaad oo badan oo guurguura
Hakim Bey, oo asal ahaan ka soo jeeda erayga kumeelgaarka ah ee ku meel gaarka ah ayaa sheegaya inay "u eg yihiin kacdoon aan si toos ah ula macaamilin gobolka, hawlgal jabhadeyn ah kaas oo xoraynaya aag (dhul, waqti, mala-awaal) ka dibna isu milmaya, si Dib-u-qaabayn meel kale / wixii kale, ka hor intaysan gobolka burburin. ”Ujeeddada aagagani maahan waarid ama iska hor imaad, dib u soo kabashaduna ma aha guul-darro, laakiin abuur la beeray ayaa loo qaadi doonaa waqti kale iyo meel dib loogu soo celin karo. .
Ujeeddadu waxay tahay in lagu faafiyo aaggan iskiis u kala fog iyo ballaadhan, si meel kasta iyo goor kasta, oo aan ahayn musiibada, dadku ay wadaagaan badeecadaha iyo adeegyada si xor ah, ugu xirmaan si qoto dheer oo dhab ah midba midka kale, leeyihiin hay'ad, go'aan ka gaarid iyo macnahooda shaqada la doorto, waqtiga ku noolaada, oo xor u ah inaad maskaxda ku fikirto, laakiin sidoo kale gacmaha iyo cagaha, adduunka ugufiican ee aan ognahay inay suurtogal tahay. Waqtiyadan, marka jirkeenu koronto ku dhaliyo suurtagalnimada garabka gudaha iyo hareeraheena, uma baahna waqti degdeg ah. Inta badan taariikhda aadanaha waxaa lagu qaatay bulshooyinka aasaaska u ahaa kaalmaynta wadajirka ah, mustaqbalkeenuna sidoo kale wuu noqon karaa haddii aan haysanno awood iyo geesinimo aan ku raacno aragtideena ilaa halka ay ku hogaamineyso.
Tusaale kale oo ah aagagga ku meelgaarka ah ee madax-bannaan waa 12 Centros de Apoyo Mutuo (CAMs) oo ku yaal Puerto Rico oo dhan. Kuwani waxay ka kooban yihiin shabakad xiisa badan oo dadka ku shaqeysa, dadaallada soo kabashada maxalliga ah ee caddaynaya is-xukunidda kacaanka ma ahan riyo, laakiin runtii waxay noqon karaan jawaab dabiici ah maqnaanshaha awoodda, awoodda tirakoobka. Waxaan hadda soo aruurinaynaa lacag si aan u helno CAM-ka Caguas nidaamkeeda sawir-qorrax-qorraxeedka u gaarka ah - oo ah is-beddel madax-bannaan oo ku yimaadda fakkaanta iyo laga yaabee, in dhowaan la gaar geliyo, Maamulka Awooda Korantada ee Puerto Rico. Waad ku deeqi kartaa mashruucan halkan.
Qaarkeen baa wali ku sugan Puerto Rico iyaga oo ka caawinaya mashaariicda markasta iyo meelkasta oo aan uga baahanahay oo aan qorsheyno inaan sii wadno sameynta mustaqbalkaan la iloobi karo. Qaarkeen baa ku mashquulsan u diyaar garowga dalxiisyo badan. Waxaadna sugtaa in badan oo idinka mid ah shaqsi ahaan usbuucyada iyo bilaha soo socda iyo istiraatiijiyad ku saabsan sida loo dhiso dhaqdhaqaaqa gargaarka wadajirka ah. Si aad u hubiso meelaha, booqo bartayada internetka. Hadaanan wali magaaladaada u sameynin, waxaan raali gelin ka bixineynaa waana kaaga mahadcelineynaa hormarkaaga sabarkaaga. Waxaan qabnay codsiyo aad u tiro badan si aan ula kulanno dhammaantood hal mar, laakiin waxaan sii wadi doonnaa boosaska booska deyrta.
Dhulbahante maskaxeedku waxay luminayaan maskaxdooda dabaysha, waxayna ku faafiyaan abuurkooda kun jeer. Waxaan nahay natiijo mid ka mid ah mirahaas. Oo annaguna waan ognahay in dhamaadka kastaaba uu bilow u yahay. Meel kasta oo aad tagtid, ha kuu qaadan karto qayb ka mid ah aag la xoreeyay. Meelkasta oo aad joogtid, waxaad noqon kartaa qalbiga iyo nafta meeshaas.
Ilaa waqti soo socda,
2018-02-04T12:25:06-05:00February 4th, 2018|updates|